Tilikambo fanamafisana Loop mihidy: Indostria simika
Ny indostrian'ny simika dia misy andiana dingana sarotra toa ny Heating, Cooling, Condensing, Evaporation ary Separation. Ny indostrian'ny simika dia iray amin'ireo sehatra manavao sy mandroso haingana indrindra. Tsy afaka miasa izy raha tsy misy tilikambo mangatsiaka, ary ampahany lehibe amin'ny Indostria Simika, izay tsy maintsy hafoana amin'ny hafanana ny hafanana na ny Fluida dia tokony halamina tsara amin'ny fatiantoka angovo faran'izay kely sy rano.
Ny vidin'ny Rising Power and Water dia mitarika ny Indostria Simika hikaroka teknolojia vaovao izay afaka hahatonga ny orinasa haharitra kokoa ary hampidina ny vidin'ny Production ihany koa.
Antenaina fa ny fandrosoana amin'ny faritra toy ny bioteknolojia, sela solika, haitao momba ny tontolo iainana ary ireo fitaovana marani-tsaina no hitarika ny lalana amin'ny fanatanterahana ny filan'ny ho avy manerantany.
Teknolojia mpampita hafanana azo antoka azo antoka ho an'ny Indostria Simika, miaraka amin'ny fampisehoana marin-toerana dia mitondra ny SPL ho lohalaharana. Ny fanjakana matanjaka amin'ny haitao kanto dia manome fahombiazana tanterakaTilikambo fanamafisana ny tadivavarana mihidy / fantsom-panafody sy mpangatsiaka hybrid.
Vahaolana sy fitaovana namboarina ho an'ny SPL dia mitondra tombony lehibe amin'ny fahombiazan'ny angovo, ny fitoniana, ny fitehirizana ary ny fitsitsiana rano, satria avelany hampangatsiaka ny fizotran'ny famokarana miaraka amin'ny fako farafahakeliny, fitantanana marina sy fikojakojana ireo singa ao amin'ny tilikambo fanamafisana mandritra ny fotoana maharitra ny fotoana.